Koox Soomaali ah oo guul weyn ka gaadhay koobka Svenska Kupen | Somaliska
Shalay waxay farxad weyn u ahayd taageerayaasha kooxda SUFstars FC (Somaliska UF) ee ka dhisan magaalada Växjö oo ah koox Soomaaliyeed ka dib markii ay ka badiyeen kooxda heerka koowaad ee Öster IF. Ciyaartaan oo la wadafilayay in ay badin doonto kooxda Öster maadaama kooxda Soomaalida ay ka ciyaareen heerka 4-aad ayaa waxay noqotay mid taariikhi ah ka dib markii labada kooxaad ay 2-2 wada galeen waqtigii caadiga ahaa, iyadoo waqti dheeri ah lagu daray ciyaarta.
Ciyaarta ayaa gababadii ku dhamaatay 3-2 oo ay guusha ku qaadeen kooxda SUFstars. Ciyaartaan oo ka mid tartanka koobka Svenska Kupen ayaa waxay horumar weyn u tahay kooxda Soomaalida oo heer fiican hada ka gaadhay koobka. Abdi Elmi oo ah agaasimaha isboortiga ee kooxda SUFstars ayaa telefishinka SVT u sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in ay garaaceen kooxda ay isku magaalada yihiin ee Öster.
Waa markii labaaad ee ay kulmaan labada kooxood, iyadoo kulankii hore kooxda Soomaalida looga adkaaday 1-0. Hada ayay ka aarsadeen guul daradii hore, iyagoo guud ahaan ka saaray kooxda Öster tartanka koobka Svenska Kupen.
Kooxda Öster IF ayaa waxay ka mid tahay kooxaha ugu facaweyn Sweden oo sida weyn loo yaqaano iyagoo la aasaasay sanadkii 1930, horyaalka Sweden ayay qaadeen 4 goor. Hambalyo ayaan leenahay SUFStars FC guusha ay gaareen.
Jimcaale magaalada magaceed maahan växsjö ee waa växjö